Uhlelo Lomcimbi Wokuhlela Nokukhangisa | Martech Zone
Uhlelo Lokuhlelwa Komcimbi kanye Nokumaketha
NgoLwesithathu, Septemba 28, 2011 NgoLwesithathu, Februwari 9, 2022 Douglas Karr
Lapho ngicabanga emuva kweminye imicimbi emangalisayo engike ngaya kuyo, njenge Zibandakanye noWebtrend, Ukuxhuma kwe-ExactTarget futhi I-BlogWorld Expo - Ngihlala ngishaywa umoya ngenani lezingxenye ezihambayo ukuya emcimbini nokuthi lezi zinhlangano zihlangana kanjani ngaphandle komthungo.
Angiyena umhleli wemicimbi. Angikwazi ukugijimisa ngaphezu kweklayenti ngasikhathi sinye, angikaze ngicabange izinkulungwane zezivakashi. (Kungakho uJenn esebenza nathi!). Abanye abantu abakwazi ukukhokhela izinsizakalo zabahleli bemicimbi yobungcweti, noma kunjalo, futhi baphoqeleka ukuba bahambe bodwa. Umcimbi wokuqala uqine kakhulu futhi kubukeka sengathi bancipha ngokuhamba kwesikhathi. Uma umcimbi owodwa ungaphansi kwebhande lakho, usuvele unezithameli zokuphromotha umcimbi olandelayo. Inqobo nje uma umcimbi wakho umuhle, ungaqhubeka nokukhula ngokuhamba kwesikhathi futhi wakhe inani lenani lomcimbi, abaxhasi bawo, nezethameli zawo.
Lokhu infographic kusuka I-Hubspot futhi Ukuxhumana okuqhubekayo uhamba kuzo zonke izinto ezibalulekile zokuhlela nokwenyusa umcimbi, kufaka phakathi ukusetha umcimbi wakho, ukukhuthaza umcimbi wakho, ukusebenzisa imithombo yezokuxhumana, ukulandela ngomkhondo, ukuqhuba umcimbi nokulandela ngemuva komcimbi. Ngiyathanda ukuthi i-infographic ikhuluma ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana ngokugcwele! Ngokwenza abantu bathumele ngenkuthalo i-hashtag yomcimbi wakho, ukhuthaza ikhwalithi yomcimbi kuwo wonke amanethiwekhi abo. Lokho kungukhiye wonyaka ozayo… lapho ubaguqula babe ngama-voyeurs babe abahlanganyeli!
Tags: ukudayiswa komcimbiUkuhlela Isenzakaloizenzakalomarketing
Uma Lokhu Bese Lokho
Okthoba 1, 2011 ngo-10: 53 AM
Kuliqiniso… ukuthi uyakwazi ukwenza okuthile akusho ukuthi awudingi isu lokumaketha eliqinile namakhono okuthengisa.
UJun 8, 2012 ngo-11: 26 AM
UDoug lokhu ukuthola okuhle, bengikade ngifuna isithombe esihle semininingwane enjengale. Ngizobe ngabelana ngalokhu nabanye abangane. Ukulungiselela yigama lomdlalo!